हिंसा न्यूनिकरण गर्न कसको भुमिका के ? (उमा पोखरेलसँगको कुराकानी)
सुर्खेत जिल्लामा अँझैपनि लैँगिक हिंसाका घटनामा कर्मी आउन सकिरहेको छैन । लैँगिक हिंसामा पनि महिला हिंसाका घटना धेरै हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा ११ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् ।
सुर्खेत जिल्लामा अँझैपनि लैँगिक हिंसाका घटनामा कर्मी आउन सकिरहेको छैन । लैँगिक हिंसामा पनि महिला हिंसाका घटना धेरै हुने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा ११ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् ।
ती मध्य घरेलु हिंसाका घटना धेरै छन् । महिलाहरु विशेष गरी श्रीमानबाट हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
सुर्खेत जिल्लामा महिला हिंसाको अवस्थाका बारेमा महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय सुर्खेतकी महिला विकास निरिक्षक उमा पोखरेलसँग जागरणकर्मी करिश्मा चौधरीले कुराकानी गर्नुभएको छ, अव पढ्नुहोस् उहाँले गर्नुभएको कुराकानीको संसोधित अंशः
प्रस्तोताः लैँगिक हिंसाको अवस्था के छ, सुर्खेत जिल्लामा ?
अतिथीः महिला माथी बिगतमा पनि हिंसा थियो, अहिले पनि भैराछ । तर, बिगतमा हिंसाका घटना बाहिर आउन सकेका थिएनन् । नेपाल सरकारको तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम भैरहेको छ त्यस्तै आम सञ्चारका माध्यमहरु बाट घटना बाहिर आईरहेको छ । त्यसैले हिंसाका घटना बढेको जस्तो महसुस भएको हो ।
प्रस्तोताः सुर्खेतमा महिलामाथी हुने हिंसा बढ्दै छ या घट्दै छ ?
अतिथीः अहिले सूचना बाहिर आउँदा त बढिरहेको छ, जस्तो लागि रहेको छ । विगतमा बाहिर नआउँदा जानकारी हुन सकेन । अहिले एक त, महिला दीदी बहीनीहरु पनि सचेत बन्नुभएको कारण पनि घटना बाहिर आउँदै छ । अर्को कुरा विभिन्न कार्यक्रम हुँदा पनि महिला हिंसा घट्न सकेको छैन ।
प्रस्तोताः के के भयो भने महिला हिंसा हो भनेर भन्न मिल्छ ?
अतिथीः महिलामाथी शारिरीक, मानसिक, आर्थिक तथा योनजन्य हिंसा हुने गर्छन् । ती मध्य पनि सबैभन्दा धेरै महिलाहरु शारिरीक हिंसामा पर्ने गर्छन् । मानसिक हिंसामा पर्ने महिलाको संख्या पनि उच्च छ । बहुबिवाहका घटना पनि बढिरहेको छ । महिलाहरु आर्थिक हिंसाको पनि सिकार बनेका छन् । महिला र पुरुषले उस्तै प्रकृतीका समान काम गर्छन् तर पारिश्रमीक पुरुषको तुलनामा थोरै पाउँछन् ।
प्रस्तोताः यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा महिला हिंसाका कतिवटा घटना दर्ता भएको छ ?
अतिथीः यो चौमासिकमा ११ वटा विभिन्न प्रकृतिका, कुटपिटका, घरेलु हिंसाको दर्ता भाछ । विशेष गरी श्रीमानले लागुपदार्थ सेवन गर्ने र कुटपिट गर्ने कुराहरु पनि आईराखेको छ । घरेलुहिंसा एकदमै धेरै छ । विषेश गरेर श्रीमानबाट धेरै छ भने अरु बाट छिटपुट छ ।
प्रस्तोताः महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न कसको के भुमिका रहन्छ ?
अतिथीः परिवारको भुमिका सबैभन्दा अगाडी रहन्छ । राज्यले त कानुनी ब्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न राज्य लागेको छ । कतिपय अवस्थामा कस्तो भैराछ भने, घटना घट्यो भने ढाछोप गर्ने, दलको आडमा हिंसा गर्ने ब्यक्तिलाई संरक्षण गरिरहेको समाजमा देखिन्छ । परिवार, समाज तथा राजनितिक दल महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न लाग्नु पर्छ । राजनितिक दलले प्रतिबद्धता जनाएमा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।